Nhau - Kubudirira AngelBiss kwakaitwa mu2019
Kwete. 2-Yepasi bhatiri rekutanga kumusoro kumusoro 5L Oxygen Concentrator inowana 93%
Kwete. 3-Kwayedza 5L okisijeni concentrator paTibet 15000ft inowana 93%
Kwete. 4-Inotengedzwazve yekukweva muchina pamusoro pe3hours
Kwete 5-20psi yakanyanya kumanikidza okisijeni concentrator inowana 95%
Kwete. 6-90psi yakanyanya kumanikidza okisijeni concentrator inowana 95%
Kwete. 7-60LPM huviri kuyerera 4bar Oxygen Concentrator inowana 95%
Kwete 1-Nyowani saiti fekitori kuwedzera
Kwete. 2-Pedzisa nyowani ISO13485: 2016 certification kuburikidza neTUV-SUD
Kwete. 3-Ita chitsva CE chitupa kuburikidza neTUV-SUD
Kwete. 4-Kushanda kweNational Patent Enterprise
Nha. 5-Onsite yemuno masevhisi eMalaysia kupinza
Nha. 6-Onsite yemuno masevhisi eNepal kupinza